Tanora sy kolontsaina : Fivorian’ny vondrona afrikana any Algérie -
AccueilVaovao SamihafaTanora sy kolontsaina : Fivorian’ny vondrona afrikana any Algérie
Tanora sy kolontsaina : Fivorian’ny vondrona afrikana any Algérie
11/10/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Ho ambohipihaonan’ny tanora afrikana. Hampiantrano hetsika ho an’ny tanora sy ny kolontsaina afrikana i Algérie. Omaly dia nanatitra ny taratasy fanasana ny minisitry ny Kolontsaina, ny fampiroboroboana ny asa tanàna, ary ny fiarovana ny vakoka, Johasy Eléonore, tetsy amin’ny birao fiasany tetsy Anosy, ny masoivohon’i Algérie eto amintsika, Mokaddem Bafdal. Ny minisitry ny Kolontsaina sy ny minisitry ny Fanatanjahantena Alzeriana no nanao sonia izany fanasana izany. Ao anatin’io fihaonana io no hanatanterahana ny fivoriana mahakasika ny tanora sy ny fanatanjahantena, ary ny kolontsaina aty Afrika ny 21 ka hatramin’ny 25 oktobra ho avy izao. « Ilaina ary tombony ho antsika ny fandraisana anjara amin’io fivoriana io, satria misy ny antsoina hoe fandaharam-potoana 2063 an’ny vondrona Afrikana », araka ny fanamarihan’ny minisitra, Johasy Eleonore. « Ilaina ny mametraka paika sy politika mazava mikasika ny tanora sy ny kolontsaina hiomanana amin’io fandaharam-potoana io. Tafiditra ao anatin’izany fiomanana izany ny fijerena ny fototry ny kolontsaina Afrikanina sy ny firenena niaviany avy, mba hisian’ny fanomanana mialohan’ ny fampitoviam-pijery ny hametrahana ny tanora », hoy hatrany izy.
Andiany faha-3 amin’ny fihaonana ity hotanterahina ity, ary nandray anjara hatrany i Madagasikara tamin’ny andiany teo aloha. Algérie izay ao anatin’ny fiomanana ny faha-64 taona nahazoany ny fahaleovantena.